Ebibi ugwu mgbawa. Gịnị bụ ugwu mgbawa nke ga-agbawa? | Network Meteorology
Ebibi ugwu mgbawa
Egwu na-atụ ugwu ugwu n'ọtụtụ ebe n'ụwa n'ihi ikike ha ibibi ihe niile. Ihe ndị a na-echetara anyị na ụwa anyị a ga-adọ anyị aka na ntị na ya nwere ike iwepụta oke iwe ya niile n'oge ọ bụla. Maka ndị ọkà mmụta sayensị, na-ebu amụma a Ebibi ugwu mgbawa ọ dị mgbagwoju anya. E nwere ọtụtụ mgbanwe dị iche iche na-emetụta usoro a. Volfọdụ ugwu mgbawa na-echegbu onwe karịa ndị ọzọ n'ihi nnukwu ikike ha nwere maka ihe egwu ma ọ bụ n'ihi ọnụ ọgụgụ ha nwere ike imetụta.
Na nke a, anyị ga-ekwu maka njirimara niile nke ugwu mgbawa na nke bụ ugwu ugwu nke mgbawa ya dị nso na atụ anya ya. Want chọrọ ịmatakwu?
1 Ihe ize ndụ nke ugwu mgbawa
2 Volcanoes "na-echere" mgbawa
3 Ọmụmụ ọkụ ọkụ
Ihe ize ndụ nke ugwu mgbawa
Maka ihe okike dịka oke mmiri ozuzo, oke ikuku, oke ifufe ma ọ bụ, dịka ọ dị na nke a, ugwu na-agbawa agbawa nwere ụfọdụ ihe egwu, enwere otutu ndi mmadu nwere ike imetuta. Nkechim ihe okike anaghị emetụta mmadụ "ọ dịghị ize ndụ". Ya mere, enwere ike ịsị na, dabere na mmetụta dị na ngwaahịa na ndụ mmadụ, ihe egwu ha na-abawanye ma ọ bụ na-ebelata.
Igwe mgbawa na-agbawa nwere ike ịdị oke egwu dabere na ụdị mgbawa ị nwere. E nwere ụdị nzụpụta dị iche iche. Ndị a bụ ndị bụ isi:
Ihe mgbawa nke Hawaii: Nke a na ụdị mgbawa nwere kpamkpam basalt mejupụtara. Aha ya bu n'ihi na o na eme n'agwaetiti ufodu dika agwaetiti Hawaii. Lava na-abụkarị ezigbo mmiri.
Mmebi Strombolian: Ha bụ ndị a ma ama maka ịbụ ndị na-apụta na fim na usoro. Magma dị ezigbo mmiri ma nwee basalts. Enwere ike ịhụ na magma jiri nwayọ gbagoo na kọlụm ugwu mgbawa ruo mgbe ọ na-ewepụta ihe gbawara wee hapụ lava niile. A na-emepụta egosipụta egosipụta n'ime ya dị ka na fim.
Vulcan ntiwapụ: Anyị na-ahụ obere ihe mgbawa. Ọ na - adị mgbe ụzọ mgbawa ugwu jupụtara na lava na, site na nchịkọta, ekpughere ya iji wepụta ihe niile. Ihe mgbawa nke magmas ndị a nwere ike were oge ole na ole.
Ihe egwu Plinian: Ihe ndi mmadu a na-egosi oke onu ogugu ha. Mgbe ihe ndị na-eme ka anwansi jikọta ya na gas ndị na-agbapụta, a na-emepụta priroclasts. A na-ewu nkume a ma ama na mgbawa ndị a.
Surtseyan gbawara: Ha na-ewere ọnọdụ mgbe magma na mmiri mmiri na-emekọrịta. Ọ bụrụ na nke a dị n'ọtụtụ dị ukwuu, a ga-enwe ntiwapụ dị ka nke mere na ugwu Surtsey (ya mere aha ya).
Igwe Hydrovolcanic: N'ime ha enwere ihe mgbawa sitere na alụlụ mmiri dị n'elu nkume. Mgbawa ndị a na-eweta mmetụta na-emebi ihe ma na-agbapụ apịtị.
Volcanoes "na-echere" mgbawa
Mgbe anyị na-ekwu maka ugwu mgbawa na-echere mgbawa, ọ ga-abụ ihe edoghị anya. Nke a bụ n'ihi na o nwere ike ịbụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ geologically arụsi ọrụ ike ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ị na-amụ banyere ihe omimi. Maka geology, geological oge ọ bụ ọkwa etu usoro niile dị n’ụwa si eme. Ọnụ ọgụgụ ahụ bụ ọtụtụ nde afọ ma ọ bụghị otu narị afọ dị ka nke mmadụ.
Yabụ na ugwu mgbawa nwere ike ịdị na - echere ala ka ọ ghara ịgbapụta ma ghara imetụta ụmụ mmadụ ugbu a ma ọlị. Were ihe atụ ntoputa nke Ugwu ugwu Kilauea. Were ya na ọ bụ geologically rue mgbe. Nke a ga - eme ka ọ gbawaa n’ime afọ 250.000. Maka oge geologic, ọnụ ọgụgụ a na afọ dị ala. Agbanyeghị, na mmadụ ọnụ ọgụgụ ya enweghị atụ. O doro anya na ọ gaghị enye gị nsogbu ịmara na meteorite ga-emetụta ụwa anyị na afọ 250.000.
Ezigbo ihe atụ bụ ugwu ọkụ Yellowstone Caldera. Ha na-ebu amụma na ha ga-adị njọ karịsịa. Ndị ọkachamara na-ekwu na lawa ahụ ga-agbatị n’agbata kilomita iri ise na ise. Ugwu ahụ nwere ike ghara ịgbawa ọtụtụ puku afọ. Agbanyeghị, ị ga - enweta ịdọ aka ná ntị otu afọ iji kwadebe maka ụdị ọdachi dị otú ahụ.
Ndị ọkà mmụta sayensị na-amụ banyere ugwu na-agbawa agbawa iji ghọta omume ahụ ma gbalịa ịkọ ya. Obere ihe amatara banyere ugwu mgbawa nke na-aru oru ugbu a n'uwa. Ihe amara bu na onwere ugwu 550 n’elu uwa. Nọmba a adịghị agụnye ndị a hụrụ na ala oké osimiri. Naanị ugwu mgbawa ndị dị nso na mpaghara nke ụwa mbụ dịka United States, Japan ma ọ bụ Italytali na-enyocha mgbe niile.
Ọmụmụ ọkụ ọkụ
Ndị ọkà mmụta sayensị na-aga n'ihu na-amụ banyere ohere nke ugwu mgbawa na-abanye. Iji chọpụta nke ọ ga-akasị weta, a na-echebara ndepụta nke ugwu mgbawa nke nwere ụdị mgbawa ụfọdụ n’ime afọ 10.000 echiche. Iji kpuchido ọnụọgụgụ ndị mmadụ na ọdachi, a ga-amụ anya ma ndị nwere ike ịnọ n’ihe egwu kwesịrị iwepụ. Mgbe ewepụrụ ndị mmadụ, ụgha ụgha na ojuju nwere ike ịmepụta site na ọnụ ọgụgụ. Ya mere, ọ dị mkpa ịnwe obi ike na mgbawa ugwu mgbawa dị nso.
Dika anyi kwuru na post, ọ dị nnọọ mgbagwoju anya ịmara ugwu mgbawa nke pụrụ ịgbawa. Ndị ọkà mmụta sayensị jisiri ike mata ugwu mgbawa ndị chọrọ nlebara anya ọzọ. Edepụtara aha ndị kachasị mkpa. Nke a apụtaghị na ugwu mgbawa na ndepụta ahụ ga-agbawa.
Ugwu nke na-apụta na ndepụta ahụ na-agbanwe agbanwe. Otutu n’ime ha no na mpaghara ndi mmadu nwere nnukwu ego. Ha nwere ike ịmepụta tọn ash, mmiri pyroclastic na-asọ, lava na-asọpụta, wdg.
Ihe ndị a niile dị oke egwu iji daa. Okwesiri ka ị mụkwuo anya ma dịrị njikere iji kpọpụ ndị mmadụ ozugbo enwere ike.
Ndị a bụ ugwu mgbawa 16 na ndepụta:
Avachinsky-Koryaksky na Kamchatka, Russia
Colima dị na Jalisco, Mexico
Galeras na Nariño, Colombia
Mauna Loa na Hawaii, United States
Etna na Sicily, Italytali
Merapi na Central Java, Indonesia
Nyiragongo na North Kivu, Democratic Republic of Congo
Rainier na Washington, United States
Vesuvius na Campania, .tali
Unzen na Nagasaki / Kumamoto, Japan
Sakurajima dị na Kagoshima, Japan
Santa Maria na Quetzaltenango, Guatemala
Santorini na South Aegean, Gris
Taal Volcano na Calabarzon, Philippines
Teide na Canary Islands, Spain
Ulawun na New Britain, Papua New Guinea
Maka ndị bi na ebe ndị a, enwere m olile anya na ha agaghị adapụta na ọkwa mmadụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ebibi ugwu mgbawa
Ndị na-ahụ maka ihu igwe